Akora Cervino ID v3 FSX & P3D
Matterhorn (Cervino amin'ny teny italiana Matterhorn tamin'ny teny alemà, Cervin amin'ny teny Frantsay) dia tendrombohitra tampon'isan'ny 4,478 metatra ambonin'ny ranomasina, any amin'ny sisin-tany Soisa-italianina, teo anelanelan'ny Ny INSEE dia ny Valais sy ny Aosta Valley. Izany no sary-zava-misy toerana tsara tarehy ny tena avy hatrany an-tendrombohitra sy ny manodidina. Textures HD, harato Loda 14.
Ny Matterhorn no nalaza indrindra tendrombohitra tany Soisa, anisan'izany ny pyramidal tarehy dia manome avy amin'ny tanànan'i Zermatt, ao amin'ny alemà miteny ampahany amin'ny INSEE dia ny Valais. Ny fiakarana ho any amin'ny avaratra ny tarehiny noheverina farany ny lehibe lalitra ny Mountaineering ao amin'ny Alpes, miaraka amin'ny Eiger sy ny an'ny Grandes Jorasses, izay miara-mamorona ny telo avaratra lehibe tarehy ny Alpes. (Wikipedia).
Ny toerana manodidina no avy hatrany dia nanambara ny installer. Tsy manana na inona na inona afa-tsy tsindrio Manaraka.
Afaka manomboka ny fiaramanidina avy any amin'ny Flag eto ambany izay hametraka fotsiny ambonin'ny Matterhorn:
Raha tsy izany, ny seranam-piaramanidina akaiky indrindra dia Bern (LSZB) tany Soisa, momba 127 Klm, mamela manomboka ny sidina drafitry!